မုတ်ဆိတ်ပုံစံများ - စတိုင်ကျသောအမျိုးသားများအတွက်ဖက်ရှင်ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ စတိုင်ကျသောအမျိုးသားများ
Alicia tomero | 10/09/2021 19:46 | ရိတ်လိုက်ပြီ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ပုံ, သဘောထားတွေ
စစ်တမ်းများအရသိရသည် အမျိုးသမီးများသည်မုတ်ဆိတ်ရှိသောအမျိုးသားများကိုပိုနှစ်သက်သည် ဆံပင်ရိတ်တဲ့လူတွေထက် ပုံသဏ္andန်၊ ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ မုတ်ဆိတ်တိုတို၊ မုတ်ဆိတ်တိုတိုများနှင့်ပြည့်နေသောသူတို့၏မျက်နှာကြီးများတွင်ယောက်ျားကြီးများရှိသည်ကိုမြင်ယောင်ရန်လိုသည်၊ ၎င်းသည်ယခုဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။
သင်ဟာမုတ်ဆိတ်မွှေးကြိုက်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်လား။ ကောင်းပြီ၊ မင်းကအမျိုးသမီးတွေကိုဒီလူတွေကိုလူလို့မြင်တဲ့အတွက်မင်းကံကောင်းနေတယ် မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သည်မရ။ သင်ဆံပင်အနည်းငယ်ချန်ထားရန်စဉ်းစားလျှင်သင်၏မျက်နှာပေါ် မူတည်၍ သင့်ကိုချော့မော့နိုင်မည့်အကောင်းဆုံးမုတ်ဆိတ်စတိုင်များကိုလည်းပေးနိုင်ပါသည်။
1.2 Chevron ပုံစံမုတ်ဆိတ်
1.3 Bear သို့မဟုတ် Hipster Beard
1.6 Bandholz ပုံစံမုတ်ဆိတ်
1.7 Van Dyke စတိုင်လ်
2 မျက်နှာပုံသဏ္န်ပေါ် မူတည်၍ မုတ်ဆိတ်မည်သို့ ၀ တ်ရမည်နည်း
နောက်တစ်ခုကတော့မင်းရဲ့ပုံစံကမင်းရဲ့စတိုင်လ်ကိုအမှတ်အသားအများဆုံးဖြစ်စေတဲ့မုတ်ဆိတ်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြမယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့တစ် ဦး စီသည်fပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်လူတစ် ဦး စီ၏မျက်နှာပုံစံနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမရ။ ဂန္ထဝင်သုံးရက်မှအဆုံးမရှိသောအလွန်သည်းသောမုတ်ဆိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။
ဒါဟာသဘာဝအကျဆုံး၊ ဂန္ထဝင်နှင့်နောက်ထပ်စီစဉ်မှုများမပါဘဲ သင်လိုအပ်သောကိုယ်ပိုင်ဖြတ်တောက်မှုများထက် ဒီမုတ်ဆိတ်ကိုကျက်သရေရှိပြီးရှည်လျားတဲ့အရာတစ်ခု ၀ တ်ဆင်နိုင်ဖို့သင်ဖတ်နိုင်တဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေကိုဆက်တိုက်ယူရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်း၌တည်၏. ၎င်းကိုမည်သို့ဝတ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောလျှို့ဝှက်ချက်မရှိပါ မင်းကမင်းရဲ့မျက်နှာရဲ့ထောင့်အားလုံးမှာကြီးထွားလာအောင်လုပ်ပြီးမင်းကမ်းလှမ်းတဲ့သိပ်သည်းတဲ့အမျိုးအစားကိုစောင့်နေဖို့ပဲလိုတယ်။
ဤစတိုင်သည်အလွန်အမှတ်ရလာပြီး၎င်းတို့၏စတိုင်လ်ကိုနှစ်သက်သောအမျိုးသားများအတွက်သာဖြစ်သည် ကြီးမြတ်ရင့်ကျက်သောစရိုက်လက္ခဏာနှင့် ၎င်းတွင်ကြီးမားပြီးထူသောနှုတ်ခမ်းမွှေးများပါ ၀ င်သည် ကျန်တဲ့မုတ်ဆိတ်တွေကိုတိုတိုဖြတ်ရမယ် သုံးရက်ရှိသကဲ့သို့ ၎င်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်သည်အံ့မခန်းဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအထိဆံပင်ကို ၀ တ်ထားရမည်။
Bear သို့မဟုတ် Hipster Beard
ဤမုတ်ဆိတ်အမျိုးအစားသည် 'ဟုလည်းခေါ်သည်Garibaldi''မရ။ များစွာသောယောက်ျားများအတွက်စံပြပြီးအလွန်ချော့မော့ပြီးဂရုစိုက်မှုအများကြီးမပေးလိုသူများအတွက်ဖြစ်သည် လုံးဝအကြာကြီးထားပါ။ လူများစွာအတွက်၎င်းသည်ဂရုစိုက်မှုနှင့်ဇွဲရှိရန်လိုအပ်သောကြောင့်အလွန်ကောင်းသောကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်အခြားသူများအတွက်မူ၎င်းတို့၏နှုတ်ခမ်းမွှေးအရှည်နှင့်၎င်း၏အလျားနှစ်ခုစလုံးကိုအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပြုပြင်ပေးရမည်ဖြစ်သောသူတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်မုတ်ဆိတ်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးဆိတ်တစ်ကောင်၏ပုံသဏ္န်၌ကျန်ရစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောသင်တုန်း (သို့) ညှပ်စက်၏အကူအညီဖြင့်နေ့စဉ်ဂရုစိုက်မှုလိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်သင်လိုချင်သည့်ပုံစံမျိုးကိုလိုချင်သည်အထိဖော်ပြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဆိတ်တစ်ကောင်နှင့်နှုတ်ခမ်းမွှေးတစ်ခုတည်းကိုစုစည်းရန်နှင့်ပါးပြင်နှင့်ပါးတို့တွင်မည်သည့်ဆံပင်မှပေါက်မပေါက်စေရန်အတွက်ပါးစပ်တစ်ဝိုက်တွင်ဆံပင်များပေါက်စေခြင်းပါဝင်သည်။
၎င်းသည်သဘာဝအကျဆုံးဖြစ်ပြီးမျက်နှာအားလုံးတို့တွင်အယုံကြည်ရဆုံးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့မုတ်ဆိတ်တွေကိုတစ်ရက်တည်းအမြဲရှည်ရှည်ထားဖို့ကရိုးရှင်းပါတယ်။ မင်းကသဘာဝအတိုင်းပေါက်တဲ့နေရာကိုကြီးထွားအောင်ခွင့်ပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာလျှို့ဝှက်ချက်တွေမရှိတော့ပါဘူး။ သင်တုန်းကသင်မုတ်ဆိတ်အရှည်ကိုရိတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးသူ Eric Bandholz မှတီထွင်ထားသော Bandholz ပုံစံကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲအလွန်ဆံပင်ရှည်သောမျက်နှာကို ၀ တ်ရန်အခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤမုတ်ဆိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားချက်ကားအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်သူ၏စတိုင်လ်ရှည်လျားပြီးလူ ဦး ရေထူထပ်သည် မာနထောင်လွှားသော၊ ကြီးကျယ်သော၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးသည်ကွေးကောက်သွားသည်နှစ်ဘက်စွန်းမှာ။
Van Dyke စတိုင်လ်
ပန်းချီဆရာ Anthony Van Dyke ကပေးသောစတိုင်မှ၎င်း၏ပုံစံကိုယူသည်။ သော့ခလောက်ပုံစံနှင့်သာဆင်တူသည် Goatee look နှင့်မုတ်ဆိတ်နှစ်ဖက်ကိုလုံးဝရိတ်ထားသည်ဆိုလိုသည်မှာပါးနှင့်မေးရိုးပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ကြော့ရှင်းသည်။
Bandholz စတိုင်မုတ်ဆိတ်နှင့် Van Dyke စတိုင်
မျက်နှာပုံသဏ္န်ပေါ် မူတည်၍ မုတ်ဆိတ်မည်သို့ ၀ တ်ရမည်နည်း
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မုတ်ဆိတ်အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးကိုလက်ခံသောမျက်နှာများရှိသည် ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေကမျက်နှာပုံသဏ္dependingန်ပေါ်မူတည်ပြီးအတိအကျဖြတ်တောက်ပြီးပုံသွင်းခံရမယ်။ ဘဲဥပုံမျက်နှာများ လက်တွေ့တွင်မုတ်ဆိတ်အမျိုးအစားအားလုံးကိုခွင့်ပြုသည်။ သင်စတိုင်လ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်အလွန်လုံးဝန်းသောမျက်နှာပုံစံမဟုတ်လျှင်သင်ပြုလုပ်သင့်သည် အသံအတိုးအကျယ်ကိုဘေးတိုက်ဖယ်ရှားပါ မေးစေ့နေရာကိုပိုရှည်အောင်ထားပါ။
မျက်နှာရှည်များအတွက် symmetry ကိုရှာရမယ်၊ နှစ်ဖက်ကိုချဲ့ရမယ်။ ဘေးဝဲယာများကိုပိုထူစေသည် မေးစေ့ဧရိယာသည်ပိုတိုသည်။ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းများအတွက် သူသည်မျက်နှာ၏နှစ်ဖက်ကိုရိတ်ခြင်း၊ ပါး၏တစ်ခြမ်းကိုရိတ်ခြင်း၊ ၎င်းထက်ပိုရှည်သောအသွင်အပြင်ကိုပေးပါလိမ့်မည်။
လေးထောင့်မျက်နှာများပေါ်တွင် မေးစေ့၏အလယ်ပိုင်း၌ဆံပင်များစွာကိုချန်။ ဘေးနှစ်ဖက်ကိုလျှော့ချပါ။ သူများအတွက် တြိဂံပုံမျက်နှာများ သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုပျော့ပြောင်းစေရန်နှင့်၎င်းအတွက်၎င်းသည်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် မုတ်ဆိတ်အပြည့်ဝတ်ပါကောင်းသော gradient တစ်ခုနှင့်အမြဲ ရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခု၏ရွေးချယ်မှုသည် ၀ န်ဆောင်မှုထက်မပိုပါ၊ သင်သံသယရှိနေသေးလျှင်မုတ်ဆိတ် ၀ တ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသိလိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားဖတ်နိုင်သည်။ ဒီ link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » မုတ်ဆိတ်စတိုင်များ